Incoko yevidiyo yeqela: yeyiphi inkonzo omele ukhethe?
Abantu bayakuthanda ukunxibelelana, kodwa kuthekani ukuba uqhelelene ngeekhilomitha kunye nomngeneleli ofunekayo?Iziphumo zovavanyo ezivela kwiinkonzo ezintlanu zengxoxo yevidiyo zabasebenzisi abaninzi ziya kukunceda wenze iklabhu yakho yenyani ukuze uncokole nabahlobo kwiwebhu.Umgangatho kunye nokusebenziseka kweenkonzo zengxoxo yevidiyo ziphenjelelwa zizinto ezininzi, ukusuka kwi-bandwidth ekhoyo ukuya kumgangatho weekhamera zewebhu zabathathi-nxaxheba.Iidesktops ezimbini, iilaptops ezimbini zeWindows kunye neMacBook enye zisetyenziselwe uvavanyo.Iikhompyuter zaziqhagamshelwe kwiNethiwekhi nge-Ethernet, iilaptops zadityaniswa nge-wireless.Uvavanyo luthathele ingqalelo ukuba kulula kangakanani ukufaka nokusebenzisa inkonzo ethile kunye nokuba banemisebenzi eyongezelelweyo.
UFakelolweHangouts zikaGoogleUkusebenzisa iiHangouts zikaGoogle, udinga iakhawunti kaGoogle+.Kananjalo kuya kufuneka ufakele isikhangeli iplug-in ehambelanayo neWindows XP nangaphezulu, iMac OS X 10.5 nangaphezulu, okanye iLinux.Incoko yevidiyo ingeniwe kwiphepha lakho likaGoogle+.Ekunene uya kufumana iqhosha lokuQala uMnxeba weVidiyo.Ukucofa kuyo kuqala kwiphepha lovavanyo apho uGoogle azakuvula ikhamera yakho yewebhu kunye nemakrofoni.Kweli nqanaba, akukho namnye kubahlobo bakho onokukubona okwangoku.
Ngexesha lentlanganiso yevidiyo, unokubukela iividiyo zikaYouTube
Iphepha lovavanyo linebhloko onokuthi ukhethe kuyo “izangqa” (okanye amaqela ezihlobo) aza kwaziswa malunga nencoko yevidiyo. Xa incoko yevidiyo iqala, nawuphi na umsebenzisi obandakanyiweyo "kwisangqa" esikhethiweyo uya kukwazi ukuyibona kwaye, ukuba uyanqwena, joyina incoko.Ukuqala ukuncokola, cofa iqhosha lokujoyina kwaye uye kwigumbi lentlanganiso yevidiyo. Ungamema abanye abasebenzisi ukuba bathathe inxaxheba kwincoko ngokuchwetheza iidilesi zabo zeGmail kwibar esekhohlo. Ukuya kuthi ga kwi-10 abantu abanokuthi bathathe inxaxheba kwinkomfa yevidiyo.
Ujongano lwevidiyo kunye nomgangathoNgexesha lencoko, isithethi siya kuboniswa kwifestile enkulu, kunye nabo bonke abanye abathathi-nxaxheba - kwiifestile ezincinci ezingezantsi. Le fomati yokubonisa ithatha unxibelelwano oluphucukileyo. Ukuba abantu ababini bathetha ngaxeshanye malunga nevolumu efanayo, iGoogle Hangouts iya kukhetha enye kuphela, eya kuboniswa embindini. Nangona kunjalo, ukuba ukhetho lweGoogle aluhambisani nawe, unokuzikhethela ngokuzimeleyo ukuba yeyiphi na inxaxheba eya kuboniswa embindini wefestile.Njengoko uvavanyo lubonisile, xa inkomfa yevidiyo idibanisa abathathi-nxaxheba abangaphezu kwesihlanu, ividiyo inokucotha, kwaye ngamanye amaxesha umfanekiso uba ngomgangatho ophantsi ngokunyanisekileyo. Ilizwi liyagqwetheka ngamanye amaxesha, kodwa ngokubanzi umgangatho wevidiyo kunye nesandi uphezulu kakhulu.
Iimpawuezongezelelweyo Ukongeza kwividiyo yokusasazwa, iGoogle Hangouts ibonelela ngezinto ezininzi. Iqhosha elikhulu elingaphantsi kweefestile zevidiyo likuvumela ukuba uthumele umyalezo obhaliweyo weqela. Kodwa kwifestile enkulu yengxoxo yevidiyo, ulwazi oluthunyelwe ngumntu ovela kubathathi-nxaxheba alubonakali. Abanye abasebenzisi, ngokwengqiqo yabo, cofa iqhosha elithi "Ncokola" ukufunda imbalelwano.Into ebalulekileyo kukukwazi ukwenza iYouTube isebenze usebenzisa iqhosha elikwisixhobo esisezantsi. Ikuvumela ukuba ufumane ividiyo eza kuboniswa kwiscreen sasekhaya kuyo yonke inkomfa. Ngexesha lokudlala ividiyo, iHangouts ziya kuzithulisa ngokuzenzekelayo imakrofoni yakho ukuze ilizwi lakho lingasasazwa ngevidiyo ngasemva. Kodwa ukuba usafuna ukuthetha, iqhosha lokucofa ukuze uthethe liza kuhlangula, eliya kunciphisa ivolumu yevidiyo kwaye uvule imakrofoni yakho.
Abanikazibamanqaku okuSebenza bayacetyiswa ukuba basebenzise esi sisombululo kuphela kwiinkomfa zevidiyo ezimfutshane, njengoko ixesha elide libangela ukufudumeza okubonakalayo kweekhompyuter zelaptop. I-Google Hangouts, kwelinye icala, sisixhobo esikhulu sonxibelelwano lwevidiyo yeqela elincinci, kodwa ukuyisebenzisa, wonke umntu kufuneka abe ne-akhawunti kaGoogle.
I-Skype PremiumInstallationUkuqhuba i-conferencing yevidiyo yeqela kwi-Skype, udinga i-akhawunti ye-Skype Premium kunye nomrhumo wokubhalisa we-$ 9 / ngenyanga (ukufikelela kwi-premium yosuku olunye kunokuthengwa nge-$ 5).Ngokuseta inkomfa yevidiyo, umnini weakhawunti yeprimiyamu unokujoyina abanye abasebenzisi beSkype kuyo, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi iakhawunti abayisebenzisayo - ihlawulwe okanye isimahla.Ukuba umququzeleli wenkomfa uyayishiya incoko yeqela, iseshoni iphela kubo bonke abathathi-nxaxheba.
Zombini iinguqulelo zasimahla kunye nezihlawulelwayo zeSkype zifuna ukubhaliswa ngenkonzo kunye nokufakelwa kwesicelo somthengi wevidiyo kwikhompyuter. Ke, ayisiyiyo eyona ndlela ilungileyo ukuba inkomfa yevidiyo ifuna ukucwangciswa ngokukhawuleza. Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho, unokukhangela abahlobo ngeFacebook, Gmail, Hotmail, okanye ngegama lakho leSkype. I-Skype Premium ikuvumela ukuba uqhagamshele kwinkomfa yevidiyo ukuya kuthi ga kwi-24 yabathathi-nxaxheba. Ukwenza incoko yevidiyo isebenze, kufuneka usebenzise inguqulelo yamva nje yenkqubo.
Ujongano lwevidiyo kunye nomgangathoNgokubanzi, umgangatho wevidiyo kunye neaudio ehanjiswa yiSkype ifanelwe yindumiso ephezulu. Umgangatho wokuhanjiswa kwevidiyo uthelekiseka naleyo ibonakaliswe yiGoogle Hangouts: ilungile kwaye icacile, kunye nokulibaziseka okuncinci. Ngamanye amaxesha umjelo wevidiyo uyabanda kwaye ingxaki ikhula njengoko inkomfa yevidiyo iqhubela phambili. Umgangatho wesandi ubungcono kancinci kunoGoogle. Abathathi-nxaxheba abatsha baboniswe kwizikrini ezincinci, kodwa ukucofa isikrini esifunwayo sisondeza kumthathi-nxaxheba othile.Umgangatho weWebcam ubaluleke kakhulu kwiSkype Premium kuneGoogle Hangouts. Uvavanyo lusebenzise iikhamera ezimbini zewebhu ze-HD ze-720p eziqhagamshelwe kwiidesktops kunye ne-MacBook enekhamera yewebhu ye-iSight eyakhelweyo. Umahluko kwisisombululo se-Skype se-iSight kunye neekhamera zewebhu zeHD zazinomtsalane. Ukuqhagamshela iikhamera ezintathu ezifanayo kwi-Google Hangouts akuzange kwenze mahluko ubaluleke kangaka kumgangatho, nangona umfanekiso osuka kwi-iSight uye wacaca ngakumbi.
Iimpawu ezongezelelweyoI-Skype ineempawu ezongezelelweyo eziluncedo ezakhelwe kwinkonzo yevidiyo yeqela. Abathathi-nxaxheba beenkomfa zevidiyo banokuthumela imiyalezo kwingxoxo, eya kuboniswa kwifestile ekhethekileyo phantsi kwevidiyo. Xa omnye wabathathi-nxaxheba ebhala umyalezo wombhalo, abanye abathathi-nxaxheba baya kubona isangqa esibomvu esincinci kwi icon yengxoxo, ebonisa ukuba umyalezo omtsha ufikile. Kwakhona kunokwenzeka ukuthumela imiyalezo kwinkomfa yevidiyo yeqela ngeSMS, kodwa lo msebenzi ufuna intlawulo eyongezelelweyo.Ukongeza, ungathumela iifayile (imifanekiso, iMP3) kwabanye abathathi-nxaxheba benkomfa ngeSkype. Oku kwenziwa ngefestile ephambili, eluncedo kakhulu, kuba awudingi ukuvula umkhangeli zincwadi okanye umxhasi we-imeyile ukuthumela iifayile kwiqela.
Ukusebenza kweNkomfayeVidiyo kwiSkype Premium kuhlawulwe kwaye kufuna isoftware eninzi ukuba ifakwe kunezinye iinkonzo.Umgangatho welizwi awulona ungcono phakathi kweenkonzo ezintlanu ezivavanyiweyo, kwaye umgangatho wevidiyo awukho ngcono kunenkonzo ye-Hangouts kaGoogle yasimahla.
I- TinychatiFakela i-Tinychat, inkonzo yengxoxo yevidiyo esekwe kwisikhangeli.Kule meko, akukho mfuneko yokuba ufake nantoni na - kufuneka ulungelelanise igumbi lakho lengxoxo okanye ujoyine esele ikhona.Inkonzo ye-Tinychat isimahla kunye neentengiso zebhena.
Ukuba uthatha isigqibo sokuseta igumbi lakho lokuncokola, iTinychat iya kukukhokela kwiifestile ezininzi ukukunceda ukhethe ikhamera yakho yewebhu kunye nemakrofoni, kwaye iya kukukhuthaza ukuba ukhethe phakathi kombhobho okanye ukucofa ukuze uthethe. Kwimeko yokugqibela, i-microphone iya kusebenza kuphela xa eli qhosha libanjwe phantsi.Kulula ukumema abanye kwincoko yevidiyo. Ukwenza oku, sebenzisa iqhosha lokwabelana elibekwe ngasentla kwefestile yencoko. I-Tinychat izakuvelisa i-URL enokuthunyelwa kuye wonke umntu. Ungafikelela kwiqela lakho le-Tinychat nge-akhawunti yakho kaFacebook, Twitter okanye ngokungaziwa njengondwendwe. Iindwendwe ezitsha ziya kukwazi ukubona incoko yevidiyo, kodwa ukongeza eyabo ividiyo kwigumbi lokuncokola, kuya kufuneka bacofe iqhosha lokuQala loSasazo.
Ujongano lwevidiyo kunye nomgangathoKwi-Tinychat, unokuququzelela ukuya kuthi ga kwi-12 yosasazo, kodwa inani lababukeli alinamda.Umgangatho wevidiyo kwiTinychat ulungile, kodwa umgangatho womsindo umbi.Ingxolo ephezulu yangasemva ayimnandanga.Amazwi avakala arhabaxa kakhulu kwaye agqwethiwe kancinci xa kuthelekiswa neeHangouts kunye neSkype.Kukho iziphazamiso kwiaudio kunye nevidiyo imizuzwana emininzi, kunye nokulibaziseka kwividiyo, emva koko ukuqalisa kwakhona isikhangeli kuyadingeka.
Iimpawu ezongezelelweyoEyona nto inomdla kakhulu ye-Tinychat yi-EtherPad Lite (ungayisungula ngokucofa i icon ngephetshana phantsi kwefestile yevidiyo).Kule block, umthathi-nxaxheba ngamnye kwinkomfa yevidiyo unokuthatha amanqaku, okwenza kube lula ukusebenzisana namaxwebhu kunye.Ngaphezu koko, amanqaku abaphi na abathathi-nxaxheba aya kuboniswa ngombala owahlukileyo.
Ukusebenzakwiingxoxo ezinde, i-Tinychat ikude neyona ndlela ilungileyo.Kodwa inokuba sisisombululo esilungileyo ukuba ufuna ukuqokelela ngokukhawuleza abantu kwinkomfa yevidiyo.Kwakhona, le nkonzo ifanelekile kumsebenzi wentsebenziswano kwiiprojekthi ezifuna ukubhala ngaphezu kokuthetha.
UFakelo lwe-AIMAV Inkonzo entsha ye-AV ye-AIM ibonisa ukuzibophelela kwe-AOL yokuhlala inokhuphiswano kushishino lweenkomfa ngevidiyo.Inkampani iphuhlise indlela elula nefanelekileyo yokunxibelelana namaqela amancinci ukuya kwabasebenzisi abane.
Incoko yevidiyo ye-AV
Ukuqala incoko kulula kakhulu: qinisekisa nje ukuba ungaphezulu kweminyaka eli-13 ubudala, kwaye i-AV iya kukunika ukufikelela kwincoko. Emva koko, inkqubo iya kuvelisa i-URL efuna ukunxibelelana nabangeneleli bexesha elizayo. Abasebenzisi beMac bokuqala banokucelwa ukuba bafakele inguqulelo yeAdobe Flash ehambelana neMac OS 10.6 okanye ngaphezulu. Ukuphumla, kusenokwenzeka ukuba sele ifakiwe, ngoko akukho mfuneko yokukhuphela kunye nokufaka isoftware eyongezelelweyo. Ukongeza, akuyi kufuneka ubhalise kwinkonzo kwaye unikeze i-AIM ngolwazi lomntu.
Ujongano lwevidiyo kunye nomgangathoKuvavanyo lwethu lwe-AV, ividiyo yenze kakubi kakhulu kunezinye iinkonzo.Umjelo wevidiyo uhlala ubanda, nangona ukuhanjiswa kweaudio kwakugqwesile.Ukuqaliswa kwenkonzo kwakhona akuzange kunikeze nto.Ngaphezu koko, emva kokulayisha kwakhona igumbi lengxoxo, abathathi-nxaxheba abathathu bafunyenwe, nangona babini kuphela ababandakanyekayo kuvavanyo.
Iimpawu ezongezelelweyo Zithobekekakhulu - incoko yombhalo kunye nokukwazi ukuthatha imifanekiso-skrini yenkomfa yevidiyo.
Ukusebenzaumgangatho we-AV awufanelekanga udliwano-ndlebe lweengcali okanye iinkomfa zoshishino. Nangona kunjalo, i-AV inokuba sisisombululo esilula nesicacileyo sokunxibelelana neqela elincinci ukuya kuthi ga kubantu abane, okanye ukulungelelanisa ngokukhawuleza iifowuni zevidiyo ngaphandle kokufaka isoftware eyongezelelweyo. Ngokomzekelo, kwenza kube lula ukunxibelelana nezalamane okanye abantu obaziyo abangenalo ulwazi oluphangaleleyo lobugcisa.
AnyMeetingUfakeloInkonzo simahla ngokupheleleyo AnyMeeting ikuvumela ukuba uqhagamshelane ukuya kubantu abathandathu ngaxeshanye kwingxoxo yevidiyo esebenzayo.Kwangaxeshanye, ukuya kuthi ga kwi-200 abantu abanokuthatha inxaxheba kwi-videoconference njengababukeli.Ukuqala ukuxoxa, umsebenzisi omnye kuphela kufuneka abhaliswe kunye nenkonzo (ngokuqhelekileyo umququzeleli wengxoxo).Ukumema abathathi-nxaxheba, cofa nje uQalisa iWebinar, kwaye emva kokucofa iQalisa imakrofoni & iqhosha lecam elibekwe kwibar yeSixhobo esezantsi, inkomfa yevidiyo izakuqala.
AnyMeeting ividiyo incoko
Ekuqaleni, i-AnyMeeting iya kubonisa ifestile yokulungiselela.Emva kokunika inkangeleko yakho ukugqiba, cofa iqhosha elithi Ndilungile kwaye uya kuzifumana ukwigumbi lenkomfa yevidiyo.
Ujongano lweVidiyo kunye noMgangathoNayiphi na iMeeting yenye inkonzo engasebenzi kakuhle kwiiMacs ezindala. Njengo-AV, ifuna ukuba i-Adobe Flash ifakwe kwi-Mac OS 10.6 okanye ngaphezulu. Kodwa umdlalo ufanelekile ikhandlela: umgangatho kunye nokuchaneka kokuhanjiswa kwevidiyo akukho ngaphantsi kwe-Google Hangouts okanye i-Skype. Umgangatho wevidiyo kunye nokuhanjiswa kwelizwi kulungile, ngaphandle kokugqithiswa kwe "metallicity" kunye nokuphazamiseka.
Iimpawu ezongezelelweyoAnyMeeting zizityebi kwiifitsha ezongezelelweyo. Unokubonisa izikrini zeentetho, ulwazi lwenkomfa yeposi, okanye usebenzise inqaku elithi "intlanganiso ngefowuni" ukwenzela ukuba abo bangenakho ukufikelela kwikhompyutheni ngoku banokulandela uphuhliso lweziganeko. Umququzeleli wenkomfa uya kubona uluhlu lwabazimasi, kwaye abakhoyo baya kuba nakho ukukhetha i-icon kwimenyu yemo yemeko ehambelana nesimo sabo sengqondo. Ukongeza, incoko yombhalo, ividiyo kunye neaudio inokuvalwa okanye yenziwe ifumaneke.
UkusebenzaKubahlobo okanye unxibelelwano losapho, le nkonzo igcwele kakhulu imisebenzi, kodwa inkulu kwiintlanganiso zoshishino kunye neentetho.Kwaye apha inzuzo yayo ebalulekileyo kukuba kuphela umququzeleli wenkomfa kufuneka abhalise kuyo.Abanye abathathi-nxaxheba bangena kwigumbi lengxoxo ngokufaka nje idilesi ye-imeyile apho isimemo sithunyelwe kubo.
Olona khetho lungconoKe yeyiphi eyona nkonzo ilungileyo?Sicinga ukuba ukhetho lwakhe luxhomekeke kwiinjongo zakho zangoku.I-Hangouts zikaGoogle kunye neSkype zimbini zezona nkonzo zidumileyo kunye nezityebileyo.Zezona zilungileyo kumaqela amancinci ngokwentelekiso, onke aneakhawunti zikaGoogle okanye zeSkype.I-Hangouts isimahla, kodwa ukuba umgangatho welizwi ubalulekile kuwe, i-Skype kufuneka ikhethwe.I-Tinychat okanye i-AV evela kwi-AIM inokuba lukhetho olulungileyo ukuba unexesha elincinci kwaye ufuna ukuncokola ngokukhawuleza ngaphandle kokufaka nayiphi na isoftware kuqala. Amalungu aya kuba nokufikelela kuyo ngokunqakraza ngokulula kwi-URL ethunyelwe kubo, ukongeza, zombini iinkonzo zikhululekile ngokupheleleyo. I-Tinychat ifaneleka ngakumbi kwabo banomdla ngakumbi ekusebenzisaneni kumaxwebhu, kunokunxibelelana ngelizwi. Kwaye inkonzo ye-AV ikhetheka ukunxibelelana nezalamane kunye nabahlobo, abangade babhalise kuyo. Okokugqibela, i-AnyMeeting ibonelela ngeqonga eligqwesileyo leenkomfa zoshishino ezinkulu, njengoko ukuya kuthi ga kwi-200 abantu banokujonga umboniso wevidiyo ngaxeshanye. Ngaphezu koko, ngumququzeleli wenkomfa kuphela ekufuneka abhalise kumboneleli-nkonzo. Iimpawu ezongezelelweyo zongeza amathuba oshishino,kodwa iya kuba yinto engafanelekanga xa unxibelelana nabahlobo okanye usapho.
Yenzelwe ntoni incoko yevidiyo?
Ekubeni umntu engumntu wentlalontle, unxibelelwano lunendima ebalulekileyo ebomini bakhe.Ngamaxesha athile, kwanoyena mntu uzigcineleyo kufuneka athethe nomntu.Ukongeza, ngaphandle kothethathethwano olusebenzayo kunye nomgangatho ophezulu, akunakwenzeka ukusombulula nayiphi na imiba yomsebenzi kunye neshishini.
Kangangeenkulungwane ezininzi, abantu baye badibana kunye nabahlobo babo kunye nabaqhelana nabo ukuze banxibelelane, kwaye basombulule yonke imiba yabo kwinkqubo yonxibelelwano.Kodwa ubunyani banamhlanje bunjalo kangangokuba kudla ngokuba nzima kuthi ukufumana ixesha lokwenza idinga, sivele kulo kwaye sithethe ngesihloko esithile kunye nomngeneleli esinomdla kuye.
Ngethamsanqa, emva kokuba i-Intanethi ingene kubomi bethu bemihla ngemihla ngokuqinileyo nangokunzulu, uninzi lonxibelelwano lwethu luye lwafudukela kwinyani.Sibhalelana nabahlobo kwiintanethi zentlalo, sithumela ii-imeyile kumaqabane ethu kunye noogxa bethu.
Kutshanje, ithuba elitsha lokunxibelelana nge-Intanethi liye lavela, elifumaneka kuye wonke umntu onekhamera yewebhu kwaye eqhagamshelwe kwi-Intanethi enesantya esiphezulu esiqhelekileyo ngaphandle komda wetrafikhi.
Ukufowuna ngevidiyo kwi-Intanethi kunikezelwa ngoku ziisayithi ezininzi kwiWebhu.Ekuphela kwento eseleyo kumsebenzisi kukwenza ukhetho ngokuthanda omnye wabo.Kuyaphawuleka, umzekelo, yinkonzo yencoko yevidiyo ekwi-intanethi http://pentavideo.ru.
Isixhobo sinonxibelelwano olufanelekileyo nolunembileyo, ngaphandle koko, simahla, nto leyo ibaluleke kakhulu kubasebenzisi abaninzi.
Incoko yevidiyo ekwi-Intanethi ikuvumela ukuba ungaqhubeli nje iingxoxo kunye ne-interlocutor, kodwa kunye nokuqhuba iincoko kunye nenani elikhulu labantu ngexesha elinye kwimodi yenkomfa.Enkosi kweli nqaku lokugqibela, iinkampani ezininzi zisebenzisa iincoko zevidiyo ukubamba iintlanganiso kunye neeofisi ezikude kunye namacandelo.
Njengoko igama libonisa, incoko yevidiyo kukukwazi ukuqhuba incoko ngefomathi yevidiyo.Ngamanye amazwi, awuva nje umnxibelelanisi wakho, kodwa uphinde umbone ngekhamera yevidiyo.
Imfuno ephezulu yeengxoxo zevidiyo ze-intanethi ngokubanzi, kunye nenkonzo ye-http://pentavideo.ru ngokukodwa, ngenxa yokuba unxibelelwano lwevidiyo ye-intanethi lubonelela ngamathuba amakhulu okuvakalisa iimvakalelo.Ewe, unxibelelwano olusebenzayo ngakumbi aluyi kulimaza iminwe yakho, njengoko kwenzeka rhoqo ukuba incoko ikwimo yembalelwano.
Kodwa unxibelelwano lwevidiyo kwi-Intanethi lufumana ukuthandwa ngakumbi nangakumbi hayi ngobuhlobo, kodwa kunxibelelwano lweshishini.Ngaphezu koko, iluncedo kakhulu.Ngoko, ngokomzekelo, umphathi okwihambo yezoshishino okanye esekhefini unokulawula ngokulula umsebenzi kwintlangano yakhe.Ewe, kunye nabaphantsi, ukuba kuyimfuneko, banethuba lokubonisana naye kuyo nayiphi na into ebalulekileyo.
Ukuba sishwankathela zonke izibonelelo eziphambili zokusebenzisa incoko yevidiyo, ke, okokuqala, la manqaku abalulekileyo alandelayo kufuneka aqatshelwe:
- ukuba nokwenzeka kokwenziwa kwezigqibo ngokukhawuleza;
- ukwanda okubonakalayo kwimveliso yabasebenzi;
- ithuba lokufumana uncedo lweengcali;
- ukonga izibonelelo zemali;
Ukuba awuzange usebenzise ifomathi yonxibelelwano lwe-intanethi ngekhamera yevidiyo ngaphambili, sicebisa ngamandla ukuba uzame.Ngokuqinisekileyo akuyi kudana.
I-Vesti.net: Incoko yevidiyo yeQela leMicrosoft iya kubeka abathathi-nxaxheba kwindawo enye ebonakalayo
UMicrosoft ubhengeze uhlaziyo olukhulu kwinkonzo yenkomfa yevidiyo yeQela.Olunye lolona tshintsho luphambili kukungeniswa kweNdlela entsha yokuHlanganisa- yaphuhliswa kwasekuqaleni kobhubhani we-coronavirus ngakumbi kwabo basebenza kwaye bafunda bekude.
Imowudi idala imvakalelo yokuba bonke abathathi-nxaxheba bentlanganiso bakwigumbi elinye ledijithali.Itekhnoloji yokwahlula esekwe kwi-AI ihambisa i-avatar yomthathi-nxaxheba kwimvelaphi jikelele.Inokujongeka, umzekelo, njengegumbi lokufundela, apho abantu abangama-49 banokuhlangana kanye.Kwiitafile ezingqukuva kunye neendibano zocweyo, ezinye iimvelaphi nazo zikwabonelelwa.
IMowudi Edibeneyo okwangoku ikwi-beta kwaye inkampani ithembisa ukuyikhulula kubo bonke abasebenzisi beQela ngo-Agasti.Izihluzi zeevidiyo nazo ziya kufumaneka kumaQela.Kwigumbi lokujonga, umsebenzisi unokukhetha isihluzi ukulungelelanisa inqanaba lokukhanya kwaye athambise ugxininiso lwekhamera ngaphambi kokujoyina intlanganiso.Unokwenza umzekelo, ukhethe ukufiphalisa imvelaphi ngasemva kwakho.
Olunye uhlaziyo yiNjongo yeDynamic.Njengoko uMicrosoft etshilo, kuye kwenzeka ukubonisa izixhobo zentsebenziswano kunye nabathathi-nxaxheba bentlanganiso ngokwabo kwiscreen esinye.Ukufikelela kwimiyalezo yencoko nako kuhlaziywe.Yonke le miyalezo ithunyelwe ngexesha lentlanganiso yeQela leMicrosoft iya kuvela kwizikrini zomntu wonke ngaphandle kokuvula iphaneli yencoko ngokwahlukeneyo.
Kwaye enye into entsha - izihlokwana kunye nenguqulelo.Abathathi-nxaxheba baya kuba nokufikelela kwinkonzo eguqulela intetho esuka kwezinye iilwimi ngexesha lokwenyani.Kwaye, ke, iinkomfa ziya kuvumela abantu abangathethi ulwimi olufanayo ukuba banxibelelane.Kamva kulo nyaka, iMicrosoft ithembisa ukongeza imibhalo ebhaliweyo yeentlanganiso, eya kukuvumela ukuba urekhode oko bekutshiwo.Emva kwentlanganiso, ifayile ekhutshelweyo epheleleyo iya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwithebhu yengxoxo yaloo ntlanganiso.
UMicrosoft uthi amaQela kungekudala azakukwazi ukuxhasa ukuya kuthi ga kwi-1,000 labantu abazileyo kwiintlanganiso, kunye nokuya kuthi ga kwi-20,000 yabantu xa kufikwa ekujongeni iintetho okanye iingxoxo.Kwi-app yeselula, inkampani ithembisa ukuzisa inkxaso kumncedisi wedijithali weCortana.Kuya kukunceda wenze iifowuni zokufowunelwa kumntu othile, uqhagamshelane nomsebenzisi kwintlanganiso ecwangcisiweyo, uyalela imiyalezo kwaye uyithumele, kunye neefayile eziyimfuneko kwingxoxo yenkomfa.
Intsha kwiJivo: incoko yevidiyo, izibalo zeakhawunti kunye nababoneleli abatsha bee-chatbots
Silungiselele izinto ezintsha ezininzi eziya kwenza lula umsebenzi kunye neJivo kunye nokunceda ukwandisa intengiso.
Sebenza nabathengi ngencoko yevidiyo
Kanye kunye neVideoForce, silungiselele isisombululo esiza kukuvumela ukuba uphume kukhuphiswano - ngoku unokusebenza kunye nabathengi besayithi ngonxibelelwano lwevidiyo, njengokuba kwenzeka kumntu.
Sebenzisa ikhowudi ye-promoVF2022kude kube yi-03/01/2022 kwaye ufumane simahla iintsuku ezingama-30 zokufikelela kwiseti epheleleyo yemisebenzi yeVideoForce.
Hlalutya izibalo kwicandelo "Isimo seAkhawunti".
Ngoku kwicandelo elithi "Isimo se-Akhawunti" unokuqokelela kwaye uthelekise idatha kuyo nayiphi na ixesha.Apha ungabona kwakhona ulwazi kwiingxoxo kunye neefowuni ezinezihluzo eziqwalaselweyo.
Hlalutya amanani kwaye wenze isigqibo malunga nendlela yokuphucula ezi zalathi.
Qhagamshela ii-chatbots ngababoneleli abatsha
Siyaqhubeka nokwandisa uluhlu lwamaqabane onokuthi ngalo wenze eyakho i-chatbot.Ngeli xesha siye saseka ukudibanisa kunye neDahi.ai kunye neenkonzo zeMetabot.
I-chatbot inokunceda ukunciphisa umthwalo wenkxaso kunye nokwandisa ukuthengisa.Ngoncedo lweenkonzo zeDahi.ai kunye neMetabot, unokuzimela ngokuzimeleyo i-bot, yongeza eyakho okanye usebenzise izikripthi esele zenziwe, kwaye udibanise kwiJivo.
Izibonelelo zeMetabot-Umakhiosekwe kokubini ukubhala kunye nokuqondwa kwentetho (NLU eneDialogflow)
-Isiseko sedatha esakhelwe-ngaphakathi sokuqokelela imibuzo kunye novavanyo
-Iipropathi zabaxumi abakwizinga eliphezulu, ukuthegiswa ngokuzenzekelayo kunye nesabelo separameter
-Izinto ezibangela ukulibaziseka kokuqala kwemibhalo kunye nokudalwa kwee-autofunnels
- Izixhobo zokudibanisa kunye ne-API yangaphandle
-Ivenkile eyakhelwe-ngaphakathi kwi-bot
- Ulwimi lokubhala olwakhelwe ngaphakathi
-Ufakelo kwilifu okanye kwiiseva
Iindleko: simahla (ukuya kuthi ga kwi-100 abasebenzisi ngenyanga), ukusuka kwi-ruble eyi-1000 ngenyanga kumsebenzisi omtsha ngamnye.
IiNzuzo zeDahi- Kumashishini amaNcinci naPhakathi
-Unxibelelwano ngesiNgesi kunye nesiTurkey.IsiRashiya sixhaswa kwiingxoxo zebhot.
Okunye ukukhutshwa kweendaba
Iileta zeendaba zeVedomosti - fumana iindaba eziphambili zeshishini ngeposi
Isigqibo seNkonzo ye-Federal yoLawulo lwezoNxibelelwano, iTekhnoloji yoLwazi kunye neMidiya yeMisa (i-Roskomnadzor) ngoNovemba 27, 2022 EL No. FS 77-79546
Umseki: JSC "IiNdaba zeNdaba zoShishino"
Kwaye malunga.Umhleli-oyiNtloko: Kazmina Irina Sergeevna
Intengiso kunye nolwazi olongezelelweyo kwiphephandaba iVedomosti.Ibhaliswe yi-Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) phantsi kwenombolo ye-PI No. FS 77 - 77720 yomhla we-17 kaJanuwari 2022.
Nakuphi na ukusetyenziswa kwezixhobo kuvunyelwe kuphela ngokuxhomekeke kwimigaqo yokushicilela kwakhona kunye nobukho be-hyperlink kwi-vedomosti.ru
Iindaba, i-analytics, uqikelelo kunye nezinye izinto ezinikezelwe kule ndawo azenzi isithembiso okanye isindululo sokuthenga okanye ukuthengisa nayiphi na impahla.
Isayithi isebenzisa iidilesi ze-IP, iikuki kunye nedatha ye-geolocation yabasebenzisi beSayithi, imigaqo yokusetyenziswa iqulethwe kuMgaqo-nkqubo waBucala.
Onke amalungelo agciniwe © Business News Media JSC, 1999-2022
IBhanki yaseAsia-Pacific imema kwincoko yevidiyo "Impembelelo yobhubhane kwisitokhwe samazwe ngamazwe kunye neemarike zotshintshiselwano lwangaphandle" kwiTelegram nge-17 kaDisemba ngo-12:00.
Kwiminyaka emibini edlulileyo, kukho utshintsho lwehlabathi kwiimarike zemasheya.Lo bhubhani usaqhubeka nokuchaphazela ezopolitiko kunye noqoqosho lwehlabathi.Uluntu lwezezimali lusabela njani kwingxaki ye-coronavirus?Zeziphi iinketho zophuhliso lwemisitho?Yintoni elindelweyo kwiimali zehlabathi?
Ngomhla we-17 kaDisemba, ngentsimbi ye-12:00 ngexesha laseMoscow, itshaneli yeTelegram yeBhanki yaseAsia-Pacific t.me/atb_su iya kubamba incoko yevidiyo yewebhu ngesihloko esithi "Impembelelo yobhubhane kwisitokhwe samazwe ngamazwe kunye neemarike zotshintshiselwano lwangaphandle."
U-Vladimir Burdenko, iNtloko yeCandelo leBhanki yoTyalo-mali kwiBhanki yase-Asia-Pacific, uya kuthetha malunga nendlela uqoqosho lwehlabathi oluziphatha ngayo ngexesha lobhubhani we-COVID-19, malunga nokusabela kwabasemagunyeni bezemali kwisidingo sokuziqhelanisa neemeko ezintsha kunye nokuba yintoni eya kuyenza. utshintsho kwiimarike zemali kwixesha elizayo ...
Incoko yevidiyo yaseRashiya, simahla
Kunye nazo zonke iintlobo zabantu.Usasazo lwe-Intanethi luqwalaselwe ngendlela yokuba kube lula kwaye kumnandi ukulwenza.Uxhuma kwaye ngokukhawuleza ufike kwi-interlocutor.Ukuba uyayithanda - uyazana, ukuba awuyithandi - ucofa iqhosha kwaye unobuso obutsha phambi kwakho.
Incoko eyonwabileyo, ukudlala ngothando okungabophelelanga, iingxoxo zeefilimu ezintsha kunye nefashoni, kwaye ngamanye amaxesha iincoko ezinzulwini zobusuku “ubomi bonke”.Ngokubanzi, nokuba unjani na umoya onawo namhlanje, ngokuqinisekileyo uya kubamba amaza akho apha.
Ewe, kuyenzeka nathi.Kwaye rhoqo.Uyabona, unxibelelwano kwi-Intanethi lunyaniseke ngakumbi kunobomi bokwenyani.Apha unokuba nguwe kwaye ungaziqhelani nabani na.Oku kuthetha ukuba kulula ukubona umntu osondeleyo kuwe emoyeni.
Ngubani okunye nathi?
Unokwenza uphendlo lwakho ngombala weenwele, ubungakanani besifuba kunye nobuchule bokupheka beborscht.Kulungile, kulungile.Sasiqhula) Kodwa amantombazana ethu apholile ngokwenene.Zijonge, le yincoko ye-VIDEO.
Kukho ezahlukeneyo.Iibrunettes, ii-blondes, ezibomvu.Abadlali bezemidlalo, iimvumi, i-stylists.Amagqwetha, abadwelisi benkqubo, emkhosini.Oosomashishini, abaphathi kunye nabasebenzi.Uxolo, akukho nkosana kwihashe elimhlophe.Kodwa sijonge :)
Ngokunyanisekileyo, olu hlobo lomfanekiso luvela ngamanye amaxesha!Badlala isiginkci, bacule iingoma kwaye benze ii-beatboxes.Ungabi neentloni nawe.Bonisa ihlabathi italente yakho.Ngubani owaziyo, mhlawumbi abavelisi nabo bajinga apha)
Apha sibhiyozela imihla yokuzalwa kwaye silungiselela "imixholo yeetheko" kunye neengcambu zeqela labo lebhola ekhatywayo abalithandayo kunye.Dibana nathi!Emva kwayo yonke loo nto, ukonwaba kuyonwabisa ngakumbi kwinkampani enkulu.
Bafuna ukudibana nawe!Babhalele ngokukhawuleza!
Senze le ncoko yevidiyo ukuze abantu abavela kwihlabathi liphela badibane kwaye bonwabe.Eyona nto iphambili kuthi kukuhloniphana kubo bonke abathathi-nxaxheba kwincoko.Ayizibandakanyi iingqiqo ezinje ngezithuko, amanyundululu, izithuko nokuthotywa isidima somntu.Konke oku kubhengezwe kwimigaqo yokusebenzisa ubutyebi bethu.Nceda uzifunde ngononophelo phambi kokuba uqalise usasazo lwakho lokuqala.
Umbuzo: Ngaba le vidiyo incokola kuphela kuyo yonke iminyaka?
A: Ayingobantu abadala kuphela abanxibelelana apha, kodwa abantwana abavumelekanga ngokungqongqo ukuba babandakanyeke kwincoko.
Q: Unxibelelwano oluchubekileyo kuphela!
A: Nceda ube nembeko kwaye ube nolwazelelelo kwingxoxo yethu yevidiyo!Kwaye baya kuba nawe ngokunjalo!
Umbuzo: Ngaba sisebenzela unxibelelwano oluhloniphekileyo nolumnandi?
IMPENDULO: Akwamkelekanga ukuba krwada nokulungisa izinto apha.Ngaphezu koko, ukusebenzisa ulwimi olungcolileyo.Naluphi na ulwimi olukrwada aluvumelekanga.Zihloniphe wena nabanye.
Q: Abavukeli, abanqolobi kunye nabanye abanenzondelelo yempambano-bahamba ehlathini !?
IMPENDULO: Sinxibelelana nabantu bezizwe ngezizwe, iintlanga neemvaba ngeemvaba ngeemvaba.Kwaye, ngokungaqhelekanga, bafumana ulwimi oluqhelekileyo phakathi kwabo.Ngoko ke, ukuba umntu uyakucaphukisa, tshintshela kwenye i-interlocutor.
Umbuzo: Akuvumelekanga ngokungqongqo ukusasaza iifoto zabanye abantu, iividiyo kunye nolwazi loqhagamshelwano kwingxoxo?
A: Awukwazi ukuthumela iinkcukacha eziyimfihlo zamaqela esithathu kuluntu.Esi sithintelo siyasuswa kuphela xa ubona uhlobo oluthile lolwaphulo-mthetho.
Umbuzo: Ngaba incoko yevidiyo asiyondawo yokuthengisa?
A: Nikela ngempahla kunye neenkonzo zakho kwizibonelelo ezizinikeleyo.Ngendlela, akuvumelekanga ukuthengisa ezinye iisayithi.
Kwingxoxo yethu yevidiyo, unokunxibelelana ngaphandle kokubhalisa, kodwa oku akuthethi ukuba asiyi kukwazi ukulandelela abaphuli-mthetho kunye nabaphuli-mthetho.Kwisayithi, sinelungelo lokurekhoda ngokuzenzekelayo zonke iindaba zabasebenzisi, ngoko ke, ukuba kuyimfuneko, akuyi kuba nzima ukufumana nokujezisa umenzi wobubi.Usenemibuzo?Ngaba unazo naziphi na iingcebiso zokuphucula umsebenzi wengxoxo yethu yevidiyo?Uqhagamshelwano lonxibelelwano nabalawuli lungezantsi.
Uyenza njani incoko yevidiyo yeqela kuWhatsApp
Uhlaziyo lwamva nje lwe-WhatsApp luzisa into ekudala ilindelwe: ukukwazi ukwenza iingxoxo zeaudio kunye nevidiyo yeqela.Ungayiqala njani inkomfa yevidiyo kuWhatsApp okanye ufowunele abantu abaninzi ngaxeshanye, siya kukuxelela kwinqaku lethu.
Iifowuni zeQela le-WhatsApp zisebenza njani
Ngelixa lo msebenzi ungafumaneki kubo bonke abasebenzisi - uvulwa ngokuthe chu kwiingingqi ezahlukeneyo.Iifowuni zeqela zingenziwa kuphela ngabo bafake inguqulelo yangoku ye-WhatsApp.
Ngexesha lokufowuna okuvakalayo kwinguqulelo entsha yesicelo, unokumema omnye umntu kwinkampani kwi-interlocutor yakho.Oko kukuthi, kuya kubakho abantu abathathu kwingxoxo yomsindo.
Iifowuni zevidiyo ziyenzeka phakathi kwabafowunelwa abane, ngoko unokongeza abantu ababini kwincoko.
Ukuba ufuna ukudibanisa abantu abangaphezu kwabane kwinkomfa, sebenzisa ezinye iinkqubo.Sathetha ngokweenkcukacha malunga neenkonzo zasimahla zokuncokola ngevidiyo kwinqaku elahlukileyo.
Yintoni incoko yevidiyo
Unxibelelwano ludlala indima ephambili kubomi bentlalo yomntu wonke.Kodwa namhlanje, ngenxa yophuhliso lwetekhnoloji, kunokwenzeka ukuba uthethe nomntu othetha naye ngezihloko ezinomdla kuwe kwi-Intanethi.Iingxoxo zevidiyo, ezifumana ngokukhawuleza ukuthandwa, ziya kunceda ukufezekisa oku.
Bazintoni?Le yingxoxo yevidiyo exhasa ukudlalwa kwakhona kwevidiyo kunye nolwazi oluvakalayo ngoqhagamshelwano lwe-Intanethi.Ubuqhetseba bayo buxhomekeke kwinto yokuba abangeneleli abangaphezu kwesibini banokunxibelelana kuyo.Ukuqala ukuncokola ngevidiyo, kufuneka ube nekhompyuter enonxibelelwano lwe-Intanethi, i-flash-player esebenzayo, ikhamera yewebhu, imakrofoni kunye nee-headphones.
Unxibelelwano ngencoko yevidiyo phantse alukho ngaphantsi kwencoko kubomi obuqhelekileyo, kuba umoya wobunyani uxhaswa lunxibelelwano olubonakalayo. I-roulette ye-Chat ifunwa ngokukhethekileyo phakathi kwabaselula, ekuvumela ukuba ube nolonwabo kwaye ufumane abahlobo abatsha abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Inkqubo yesayithi yenzelwe ngendlela yokuba ngaphambi kokuba uqale ukukhetha i-interlocutor, ungafaka iiparitha ezifunwayo, umzekelo, ubudala okanye ilizwe lokuhlala. Inzuzo ephambili yonxibelelwano kwi-Intanethi kukuba ibangela iimvakalelo ezininzi ezingaqhelekanga kunye nokukhawuleza kwe-adrenaline emntwini, okwenza kube lula ukunyanzelwa kancinci, nakwabo bantu baneengxaki ezininzi ngentloni ebomini bokwenyani. Ngamanye amazwi, incoko yevidiyo ilungele ukunika wonke umntu unxibelelwano olulula, olunokuphazamiseka nangaliphi na ixesha ukuba incoko iyeka ukukufanela.
Ukuba uyakholelwa kwiinkcukacha-manani, ngoko izibini ezininzi apho indoda nomfazi bengabemi bamazwe ahlukeneyo basekwa ngokubulela kunxibelelwano kwiingxoxo zevidiyo.Ke ngoko, ukuba awukwazanga ukufumana iqabane lomphefumlo kwindawo okuyo ixesha elide, okanye awunayo ingqalelo eyaneleyo yesini esahlukileyo, vele uye kwincoko yeroulette.Apha ngokuqinisekileyo uya kufumana i-interlocutor onokuthi ube nentetho emnandi kwaye kwixesha elizayo uququzelele intlanganiso ebomini bokwenene.
Kwakhona, ungalibali ukuba iincoko zevidiyo ziya kuba sisisombululo esihle kakhulu kubantu abafuna ukufunda ulwimi lwasemzini.Emva kwayo yonke loo nto, nokuba uphonononga iziseko zethiyori yonke imihla, awuyi kukwazi ukufikelela kwisiphumo oyifunayo ngaphandle kokuziqhelanisa.Ingxoxo yevidiyo sisixhobo esidibanisa izigidi zabantu abavela kumazwe ahlukeneyo.Ke ngoko, unokudibanisa unxibelelwano olumnandi kunye nokuziqhelanisa nolwimi oluyimfuneko.
Amaqela eMicrosoft aza kufumana uguqulelo oluntsonkothileyo ekupheleni kukaJulayi
NgoMatshi walo nyaka, iMicrosoft yathembisa ukunika ishishini layo iMicrosoft Teams iqonga ngenkxaso yokufikelela esiphelweni sokufihlakala kwikamva elingekude.Inkampani isandula ukubhengeza ukuba ukukhutshwa kwenqaku kuya kuqala ekuqaleni kukaJulayi.Kuya kuthatha malunga neeveki ezimbini ukuyidibanisa ngokupheleleyo.
Uguqulelo oluntsonkothileyo oluya esiphelweni luguqulelo oluntsonkothileyo kwimvelaphi yalo kunye nokuguqulelwa kwentsonkotha ngokwenjongo yalo ngaphandle kokuba nokwenzeka koguqulelo oluntsonkothileyo ngeenodi eziphakathi.Amaqela e-Microsoft aza kusebenzisa uguqulelo oluntsonkothileyo olusuka ekupheleni ukuya esiphelweni (E2EE) kwiifowuni zeVoIP zamaqela ama-2, evumela abasebenzisi ukuba bakhuphele ngokukhuselekileyo iinkcukacha ezibuthathaka ezinje ngeepassword.
Ngokutsho kwe-MSPoweruserportal , eli nqaku linokwenziwa ngabalawuli kubo bobabini abasebenzisi abathile kunye nombutho uphela.Abasebenzisi emva koko banokwenza ufihlo olusekugqibeleni ukuya esiphelweni besebenzisa i-End-to-End-End Encryption ukhetho phantsi koSeto-> Ubumfihlo.Ukurekhodwa kwefowuni kunye nokukhutshelwa akusayi kuphinda kufumaneke.Iifowuni ze-E2EE ziya kuxhasa kuphela iimpawu ezisisiseko ezifana nesandi, ividiyo, ukwabelana ngesikrini, incoko, kunye neempawu eziphambili aziyi kufumaneka.
Uguqulelo oluntsonkothileyo luya kusebenza kuphela ukuba bobabini umnxeba kunye nomamkeli womnxeba benze i-E2EE isebenze kwiisetingi zabo.Uguqulelo oluntsonkothileyo ukuya esiphelweni luya kufumaneka kuphela kwi-desktop kunye nabathengi abaphathwayo, hayi kushicilelo lwewebhu lwamaQela.
U-Snapchat utyholwa ngengozi yemoto ebulalayo
Emva kweminyaka emithathu yemalinge yokuzama ukumangalela umthunywa odumileyo we-Snapchat, abazali babantwana abakwishumi elivisayo ababulawa kwingozi yemoto banethuba lokuzisa inkonzo engenakuchaphazeleka.Kubonakala ngathi "iCandelo lama-230" elidume ngokubi kunye elingagungqiyo leKhowudi yeMithetho yase-US, ekhulula umnini wesixhobo se-Intanethi kuxanduva lwento abasebenzisi abayithumela kuyo, iye yaqhekeka.
Siza kukhumbuza, ngoMeyi 2022 eWalworth County, eWisconsin, abantu abatsha abathathu bafa kwingozi yemoto, bezifaka kwi-Snapchat. Ngokwabazali bomnye wamaxhoba, umqhubi ukhawuleze waya kwi-123 mph ukuze abambe isantya esiphezulu esebenzisa i-Snapchat kwaye abelane ngempumelelo ethandabuzekayo nababhalisi. Bakholelwa ukuba ulutsha alunakwenza into yobudenge ukuba bekungengenxa yezenzo zenkonzo ye-Intanethi.
Inyani kukuba i-Snapchat ikuvumela ukuba usebenzise izihluzi ezahlukeneyo kwi-intanethi, kubandakanywa, phakathi kwemisebenzi eyaziwayo, kukho ukukwazi ukudubula ividiyo nge "speed filter". Ukwenza oku, inkqubo ilandelela indawo yesixhobo isebenzisa iinzwa ze-GPS kwaye ibonisa ixabiso lesantya kwividiyo. Abazali bakholelwa ukuba inkonzo yevidiyo kufuneka ithwale uxanduva lokwenzekayo ngenxa yokuba ikhupha izixhobo ezinjalo, oko kuthetha ukuba ikhuthaza abasebenzisi ukuba benze izinto ezinqwenelayo xa bengekho.
Iinzame zokuqala zokuzisa abameli be-Snapchat enkundleni azizange ziphumelele. Kuvela ukuba ezi ntlobo zeenkampani ze-tech ziwela phantsi kokhuseleko lwe "Section 230" kwaye zikhululekile ngokupheleleyo kuxanduva lwezenzo zabasebenzisi ngaphakathi kwenkonzo. Ayinamsebenzi nokuba ipapasha izinto ezingafanelekanga okanye isebenzisa inkonzo ngeenjongo zokuzonwabisa kwimeko eyingozi - njengakule meko. Ngoko ke, iNkundla Yezibheno yaseUnited States yeSekethe yeThoba yasuka yasichitha eso sicelo yaza yalichitha elo tyala ngaphandle kokuxoxwa kwetyala.
Emva kweminyaka emininzi yemizamo engenamsebenzi yokudlula "iCandelo le-230" elidumileyo, abamangali bazama ukuhamba ukusuka kwelinye icala - ukuba kukholelwa ukuba i-Snapchat ibandakanya abasebenzisi ukuba benze naziphi na izenzo eziyingozi nezingamkelekanga, ke ityala linokuphumelela enkundleni. . Inkonzo ayinakuthwala uxanduva lwezenzo zabasebenzisi, kodwa kuya kubakho isohlwayo sokukhuthaza ukwenza nayiphi na isenzo.
Ngokuqinisekileyo, imeko ifikelele kwinqanaba elingenangqondo - umthetho ukhona ukususela ngo-1996, ngoko ke, akunakwenzeka ukuqwalasela isenzo sayo esichanekileyo ngoku, ukuyibeka kakuhle.Kwangaxeshanye, ukulibaziseka kwe-bureaucratic kusekho, kwaye iinkundla azinakwenza nantoni na ngokuthe ngqo kumatyala anjalo.Le meko sele ibangele i-resonance ebanzi kuluntu, kwaye iNkundla ePhakamileyo yase-US uClarence Thomas uye waba nomdla kwityala elinzima - oku kuthetha ukuba kukho lonke ithuba lokukhonza i-Snapchat nge-subpoena kunye nokuwina ityala ngokuthanda abonzakeleyo. itheko.Ngaphezu koko, uloyiso kwelinye ityala lusenokuvula ithuba lokugwebela eminye imibutho ebikhe yalibaleka imbopheleleko yaza yaqhubeka isebenza ngokuchasene nemithetho yokuziphatha.
Amaqela eMicrosoft aza kufumana uguqulelo oluntsonkothileyo ukuya ekupheleni kunye nezakhono eziphuculweyo zokubonisa
IMicrosoft iyaqhubeka nokuphucula iqonga leqela leMicrosoft Teams kwaye izakongeza amanqaku amatsha kuyo kungekudala.Okokuqala, ukubethelwa kokuphela ukuya ekupheleni kuya kubonakala eqongeni, kwaye okwesibini, inkampani iya kuhlukanisa useto kunye nobuchule benkomfa yevidiyo.
Inguqulelo ye-beta yenqaku lokubethelwa kokuphela ukuya ekupheleni kuQela likaMicrosoft liya kuvela kwisiqingatha sokuqala salo nyaka kubasebenzisi bezorhwebo beqonga.Iya kufumaneka kwiifowuni ezingacwangciswanga kunye nabathathi-nxaxheba ababini.Kwixesha elizayo, kucwangciswe ukwazisa ukubethelwa kokuphela ukuya ekupheleni kweenkomfa zevidiyo ezicwangcisiweyo kunye nenani elikhulu labathathi-nxaxheba.
Amaqela eMicrosoft okwangoku akakuxhasi uguqulelo olusekugqibeleni ukuya esiphelweni kwiifowuni zevidiyo. Idata iguqulelwe ngokuntsonkothileyo xa kuthuthwa kwaye kugcino, okunokwenzeka ukuba ishiyeke inokwenzeka kwiinkonzo ezigunyazisiweyo ukuba zifikelele kuyo ngokuyicoca. Inkampani isebenzisa uguqulelo oluntsonkothileyo lweSharePoint ukukhusela idatha egciniweyo, kwaye uguqulelo oluntsonkothileyo lwe-OneNote lusetyenziswa kumanqaku agcinwe kumaQela eMicrosoft. Yonke imixholo yengxoxo nayo ifihliwe ngexesha logqithiso kunye nokugcinwa. Umntu okhuphisana naye ophambili weQela likaMicrosoft, uSlack, naye akanalo uguqulelo oluntsonkothileyo. Kwaye inkonzo yeZoom yaqala ukudibanisa itekhnoloji ngo-Okthobha kulo nyaka uphelileyo.
Iimodi ezintathu ezintsha zokubonisa nazo ziya kuvela kwiisetingi zenkomfa yevidiyo yeQela leMicrosoft.Imowudi yeNtathelo iya kuvumela umxholo wedijithali ukuba uqulunqwe ecaleni kobuso besithethi njengento ebonwayo yombukeli.Kusetyenziswa indlela efanayo kumabonwakude.
Imowudi yokuma ikuvumela ukuba ubeke ubuso bakho ngaphezulu komxholo obonisiweyo, obekwe kuyo yonke indawo yesikrini.Imo yesithathu yecala necala ibeka ubuso besithethi ecaleni komxholo oboniswayo.Imowudi yokuma iza kwiQela leMicrosoft kamva kule nyanga, kunye nezinye iindlela ezimbini eziza kamva.
IMicrosoft ikwaphehlelele iplugin yePowerPoint Live yaMaqela namhlanje.Iza kwenza lula iinkcazo-ntetho zePowerPoint kubo bobabini umsasazi kunye nabanye abathathi-nxaxheba kwinkomfa.
Ababonisi ngoku banokubona incoko, amanqaku kunye nezilayidi kwifestile enye, kwaye abanye abathathi-nxaxheba bentlanganiso banokujonga ngokuzimeleyo izilayidi ezibonisiweyo.
Umnini weTinder uthengela umphuhlisi weenkonzo zevidiyo yaseKorea iHyperconnect nge-1.7 yeebhiliyoni zeedola
Iqela lomdlalo, eliphethe iTinder, libhengeze ukuthengwa kwenkampani yeenkonzo zevidiyo yaseKorea iHyperconnect.Isivumelwano safikelela kwi-1,7 yeebhiliyoni zeedola.Le yeyona nto ifunyenweyo inkulu kwimbali yeQela loMatshisi.
Iindaba zaseDallas Morning
Umphuhlisi waseKorea ungumnikazi we-apps ezimbini eziphambili: I-Azar yeyomsindo kunye nevidiyo yokuncokola, kwaye Akukho Live yeyokusasazwa kwi-intanethi.Inkampani yaseKorea inenzuzo, kunye nengeniso ye-2022 ifikelela kwi-200 yezigidi zeedola, i-Match Group yathi.Oku kungaphezulu kwama-50% kunonyaka ongaphambili.Iinkonzo zithandwa kakhulu kwiimarike zaseAsia, ngoko ke, i-75% yengeniso ivela kubahlali baseAsia.
I-Hyperconnect idume ngokuyila kwayo.Inkampani yenze into ebizwa ngokuba "yinguqulo yokuqala yeselula" yeWebRTC.Yenzelwe unxibelelwano oluthe ngqo lontanga ukuya kubasebenzisi beselula ngaphandle kokusebenzisa iiseva.Oku kuphucula ukhuseleko lomsebenzisi kwaye kunciphisa umqambi ngaphezulu.
Enye iteknoloji yenkampani yaseKorea yenza kube lula ukuba abameli bamaqela eelwimi ezahlukeneyo banxibelelane.Ivumela abangeneleli ukuba bathethe kwaye babhalele besebenzisa inguqulelo yexesha langempela.Eli nqaku lisetyenziswa kwinkonzo yeAzar.
Zeziphi iinjongo Match Group efunyenwe Hyperconnect ayichazwanga.Iintatheli zeTechcrunch ziqikelela ukuba inkampani inokudibanisa itekhnoloji kwiTinder kunye nezinye iinkonzo zokuthandana kwixesha elizayo.Ukuvalwa kwesivumelwano kulindeleke kwikota yesibini ka-2022.
UZoom wagwetywa ngokugqwetha izibalo zabasebenzisi abasebenzayo
Inkonzo yokufowuna ngevidiyo kaZoom ayinabo abasebenzisi abazizigidi ezingama-300 abasebenzayo mihla le ababhengezwe yinkampani ngaphambili.Umboneleli-nkonzo uye wayivuma le nyaniso emva kokuba i-portal ye-Verge itsalele ingqalelo kwingxelo esemthethweni epapashwe ngaphambili ehlelwe yiyo.
Ingxelo yokuqala kaZoom yathi... "ngaphezu kwezigidi ezingama-300 zabasebenzisi bemihla ngemihla."kwaye."Bangaphezulu kwe-300 yezigidi zabantu kwihlabathi liphela abasebenzisa iZoom ngeli xesha linzima" ...Emva kosuku, umyalezo wahlelwa.Ngoku ifundeka" 300 Million Zoom Video Conferencing Members. "
Njengoko iVerge ibonisa, kukho umahluko omkhulu malunga nomsebenzisi osebenzayo wemihla ngemihla kunye nomthathi-nxaxheba wengxoxo yevidiyo.Kwimeko yesibini, umntu ofanayo angabalwa amaxesha amaninzi: ukuba uququzelele iiseshoni zonxibelelwano zevidiyo ezintlanu emini, uya kubalwa njengabasebenzisi abahlanu."UMsebenzisi oSebenzayo ngeMihla" ubalwa kanye kuphela ngosuku.Kulo mqondiso ukuba ukuthandwa kwenkonzo ethile ngokuqhelekileyo kubalwa.Kungenjalo, abaphulaphuli baseqongeni baya kukhangeleka bebaninzi ngakumbi kunokuba benjalo ngokwenene.
UZoom uhlele umyalezo olahlekisayo nge-24 ka-Epreli, kuphela usuku emva kokupapashwa, ewe, ekwazile ukusasazeka kuzo zonke izihloko zopapasho olukwi-intanethi.Emva kokuba iVerge isondele kwiZoom, inkampani yakhawuleza yavuma impazamo.
“Siyazingca ngokunceda abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-300 abafowunelweyo bevidiyo mihla le ukuba bahlale benxibelelene ngexesha lo bhubhani.Kwiposti kwibhlog yethu nge-22 ka-Epreli, sibize amalungu singaqondanga ngokuthi "abasebenzisi".Emva kokuqonda impazamo, sihlele umyalezo "kumalungu".Olu ibiluqwalaselo olukhulu kwicala lethu, ”uZoom uphendule kwisibheno seVerge.
Upapasho olukwi-Intanethi luphawula ukuba nangona inkampani ingakhange ibonelele ngedatha ngenani labasebenzisi bemihla ngemihla, ukukhula kwabaphulaphuli beZoom kuyamangalisa ngokwenene.Ukusukela ngoDisemba kulo nyaka uphelileyo, inani labathathi-nxaxheba bevidiyo yemihla ngemihla linyuke ukusuka kwi-10 yezigidi ukuya kwi-300 yezigidi namhlanje.
Abona bakhuphisana baphambili Amaqela eMicrosoft kunye neNtlanganiso kaGoogle basalela ngasemva, kodwa banyusa inani labasebenzisi abasebenzayo.Abaphulaphuli bemihla ngemihla beencoko zevidiyo zeMicrosoft kule nyanga banyuke ukusuka kwi-70 ukuya kwi-75 yezigidi zabantu.Kule nyanga, inkampani irekhode izigidi ezingama-200 zabathathi-nxaxheba kwi-videoconferencing ngosuku.
Inani labathathi-nxaxheba be-Google Meet kwifowuni yevidiyo likhula malunga nezigidi ezi-3 yonke imihla ukufikelela kwizigidi ezili-100. Isicelo se-Webex se-Cisco sentsebenziswano sele sisetyenziswe ngabantu abazizigidi ezingama-300.Kwaye inani lokubhaliswa ngosuku lisondela kwi-240 000. Kodwa inkampani ayikaboneleli ngezibonakaliso zabasebenzisi abasebenzayo bemihla ngemihla kunye nenani labathathi-nxaxheba kwiintlanganiso zevidiyo.
I-Google, iMicrosoft, i-Facebook isendimeni yokubamba kwaye izama ukutsala abasebenzisi abatsha ngamathuba asimahla.Umzekelo, uGoogle usandula ukwenza inkonzo yakhe yeNtlanganiso yasimahla.